FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah (WOL) | Diary 2014
Nolazaina tao amin’ny jw.org, tamin’ny 28 Jona 2013, fa efa misy amin’ny fiteny 100 ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ny Internet (WOL). Ahafahana manao fikarohana toy ny amin’ny Watchtower Library amin’ny CD-ROM izy io. Azo andefasana azy io ny fitaovana misy Internet, toy ny ordinatera, tablette, na smartphone. Ahitana gazety nivoaka tamin’ny 2000 no ho mankatỳ ao. Fiteny maro koa no efa manana Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao sy Fandalinana ny Soratra Masina ao amin’izy io. Afaka mitady teny, fehezanteny, na fitambaran-teny, toy ny amin’ny Watchtower Library, ianao ao amin’izy io. Azo atao koa ny mijery andinin-teny na fanazavana amin’ny fiteny iray, dia avy eo mampifanitsy an’izany amin’ny fiteny hafa. Ireto misy teny fankasitrahana vitsivitsy, noho io fitaovana sarobidy io:
“Misaotra betsaka anareo tamin’ny WOL. Faly be aho rehefa nahita an’io fitaovana vaovao io, izay azoko ampiasaina rehefa mianatra samirery. Tsy tena mahay ordinatera sy Internet aho, nefa hitako hoe tena tsara io fitaovana io. Tena miharihary hoe tia olona ianareo, tia an’ireo rahalahy, ary tia an’i Jehovah. Hita amin’ny fomba nanaovana ny WOL fa tena miahy ny hafa ianareo. Heveriko fa io no fanomezana tsara indrindra amin’izao andro izao, ary hita amin’izy io hoe be fitiavana sy malala-tanana i Jehovah, ilay Raintsika any an-danitra. Misaotra be dia be.”—A., Arzantina.
“Tena tsy mampino! Nanokatra ny WOL aho androany tolakandro, dia nahita hoe lasa misy amin’ny fiteny kreôla any Haïti izy io. Tsy noeritreretiko hitranga mihitsy izany! Hitanareo amin’ity taratasy ity fa tsy hitako izay teny mahalaza ny ato am-poko. Enga anie i Jehovah ka hitahy ny ezaka rehetra ataonareo, ary hitarika anareo foana anie ny fanahy masina.”—D.C., Etazonia.